लेख > चर्च > चर्चका छवटा कार्यहरू
हामी किन हरेक हप्ता पूजा र निर्देशनको लागि भेला हुन्छौं? के हामी घरमा प्रार्थना गर्न, बाइबल पढ्न र घरमा कम प्रयास गरेर रेडियोको उपदेश सुन्न सक्दैनौं?
प्रथम शताब्दीमा, मानिसहरू साप्ताहिक रूपमा धर्मशास्त्र सुन्न भेला हुन्थे - तर आज हामी आफैले बाइबलका प्रतिहरू पढ्न सक्छौं। त्यसोभए घरमै बस्न र बाइबल एक्लै पढ्नु भए कसो होला? यो पक्कै सजिलो हुनेछ - र सस्तो पनि। आधुनिक टेक्नोलोजीको साथ, विश्वका सबैले प्रत्येक हप्ता संसारका सर्वश्रेष्ठ प्रचारकहरू सुन्न सक्दछन्! वा हामीसँग विकल्पहरूको छनौट हुन सक्छ र हामी हाम्रो उपेक्षा गर्ने विषयहरू वा हाम्रो मनपराउने विषयहरू सुन्छौं। के यो अद्भुत हुने थिएन?
ठीक छ, वास्तव मा छैन। म विश्वास गर्दछु कि घरमा बस्ने इसाईहरूले चर्चको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई गुमाइरहेका छन्। म यी लेखहरूमा यसलाई सम्बोधन गर्न आशा गर्दछु, दुबै वफादार आगन्तुकहरूलाई हाम्रा सभाहरूबाट अधिक लिनको लागि र अरूलाई साप्ताहिक सेवाहरूमा उपस्थित हुन प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहित गर्न। हामी किन हरेक हप्ता भेला हुन्छौं भनेर बुझ्नको लागि यो आफैलाई सोध्नु सहयोगी हुन्छ, "परमेश्वरले चर्च किन बनाउनुभयो?" यसको उद्देश्य के हो? जब हामी चर्चको कामहरू सिक्छौं, हामी देख्न सक्छौं कि हाम्रा साप्ताहिक सभाहरूले कसरी आफ्ना बच्चाहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा अनुसार विभिन्न उद्देश्यहरू पूरा गर्दछन्।
हेर्नुहोस्, हामी परमेश्वरका आज्ञाहरू मनपर्दो छैनौं केवल यो हेर्न कि हामी उफ्रन्छ जब ऊ जम्प भन्छ। होईन, उहाँका आज्ञाहरू हाम्रो भलाइका लागि छन्। निस्सन्देह, यदि हामी जवान मसीहीहरू हौं भने हामीले बुझ्न सक्दैनौं कि उहाँले किन केही खास चीजहरूको आज्ञा गर्नुहुन्छ र हामीले सबै कारणहरू बुझ्नु अघि नै हामीले त्यसलाई पालन गर्नै पर्छ। हामी केवल भगवानमा भरोसा राख्छौं कि उहाँलाई सबै कुरा राम्रो हुन्छ र हामी जे भन्छौं त्यही गर्छौं। त्यसकारण एक जवान इसाई मात्र चर्चमा जान सक्छ किनकि इसाईहरूले त्यस्तो अपेक्षा गरेको हुन्छ। एक जवान इसाईले केवल सेवामा भाग लिन सक्दछ किनकि हिब्रू १०:२:10,25 मा भनिएको छ, "हामी हाम्रा सभाहरू छाड्दैनौं ..." अहिलेसम्म, यति राम्रो। तर जब हामी विश्वासमा परिपक्व हुन्छौं, हामीले किन परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई एक ठाउँमा भेला हुन आज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको गहिराइसम्म बुझ्नुपर्दछ।
तर आजकल मानिसहरू गुनासो गर्छन् कि तिनीहरूले उपदेशबाट केहि पनि लिएनन्। यो सत्य हुन सक्छ, तर यो बैठकहरूमा नआउनको लागि वास्तवमै बहाना होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले "लिने" बाट "दिने" मा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्दछ। हामी चर्चका सेवाहरूमा भर्ना मात्र जान्छौं, बरु दिंदैनौं - हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरको उपासना गर्न र समुदायका अन्य सदस्यहरूको सेवा गर्न।
हामी चर्च सेवाहरूमा कसरी एक अर्काको सेवा गर्न सक्छौं? बच्चाहरूलाई सिकाएर, भवन सफा गर्न मद्दत गर्दै, गीतहरू गाउँदै र विशेष स playing्गीत बजाउँदै, कुर्सीहरू स्थापना गर्ने, मानिसहरूलाई अभिवादन गर्ने आदि। हामी त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्छौं जहाँ अरूले उपदेशबाट केही लिन सक्दछन्। हामीसँग स fellow्गतता र आवश्यकताहरू छन् जुन हामीले हप्ताको समयमा अरूलाई मद्दत गर्नका लागि प्रार्थना गर्न सक्दछौं। यदि तपाईंले प्रवचनबाट केहि पनि प्राप्त गर्नुभएन भने, अरूलाई दिने सेवामा कम्तिमा भाग लिनुहोस्।
येशूबाट उदाहरण लिनुहोस्। उहाँ नियमित रूपमा सभाघरको भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो र धर्मशास्त्रको पढाइ नियमित तवरले सुन्नुहुन्थ्यो जसले गर्दा उसलाई केही बुझ्न सकेन, तर तिनी अझै उपासना गर्न गए। हुनसक्छ यो पावल जस्ता शिक्षित मानिसका लागि बोरिंग थियो, तर त्यसले उसलाई रोक्न सकेन।
कर्तव्य र इच्छा
येशूले तिनीहरूलाई अनन्त मृत्युबाट बचाउनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरू यसका बारे साँच्चिकै उत्साहित हुनुपर्छ। तिनीहरू अरूलाई भेट्न अगाडि हेर्छन् उनीहरूको उद्धारकर्ताको प्रशंसा गर्न। हो, कहिलेकाँही हामी खराब दिनहरू हुन्छौं र वास्तवमै चर्च जान चाहँदैनौं। तर यदि यो क्षणमा हामी जे चाहन्छौं वास्तवमा चाहिदैन भने पनि यो हाम्रो कर्तव्य हो। हामी केवल जीवनको माध्यमबाट जान सक्दैनौं र केवल हामीले जस्तो महसुस गर्छौं मात्र गर्न सक्दैनौं - यदि हामी येशूलाई हाम्रो प्रभुको रूपमा पछ्याउँदैनौं भने। ऊ आफ्नै इच्छा गर्न कोशिस गरेन, तर बुबाको। कहिलेकाँही हामी समाप्त हुन्छौं। यदि सबै कुरा असफल भयो भने, पुरानो भनाइ अनुसार, अपरेटिंग निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। र निर्देशनहरू हामीलाई सेवाहरूमा उपस्थित हुन भन्छन्।
तर किन? चर्च भनेको के हो? चर्चका धेरै कार्यहरू छन्। तिनीहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ - माथि, भित्र र बाहिर। यो संगठनात्मक योजना, जस्तो कि कुनै योजना, दुबै फाइदाहरू र सीमितताहरू छन्। यो सरल छ र सरलता राम्रो छ।
तर यसले यो तथ्यलाई देखाउँदैन कि हाम्रो माथिका सम्बन्धको निजी र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दुबै छ। यसले चर्च भित्रका सम्बन्धहरू चर्चका सबैका लागि ठ्याक्कै मिल्दैन भन्ने तथ्यलाई लुकाउँछ। यसले देखाउँदैन कि सेवा आन्तरिक र बाह्य दुवै दुबै चर्च भित्र र बाहिरबाट समुदाय र छिमेकमा प्रदान गरिएको छ।
चर्चको कामका थप पक्षहरूलाई प्रकाश पार्न केही ईसाईहरूले चार वा पाँच गुणा योजना प्रयोग गरेका छन्। म यस लेख को लागी छ श्रेणिहरु को उपयोग गरीन्छु।
यो मूल्य प्रस्ताव निजी रूपमा व्यक्त गरिएको छ, हाम्रो प्रार्थना मा, र सार्वजनिक शब्द र प्रशंसा मा। १ पत्रुस २: states ले भन्छ कि हामीलाई परमेश्वरको प्रशंसाको घोषणा गर्न बोलाइएको छ। यो सार्वजनिक बयान सुझाव दिन्छ। दुबै पुरानो र नयाँ करारले कसरी परमेश्वरका मानिसहरूले एक साथ समुदाय, भगवानको रूपमा पूजा गर्दछन् भनेर देखाउँदछ।
पुरानो र नयाँ नियममा बाइबलीय मोडेलले देखाउँदछ कि गीतहरू प्रायः पूजाको भाग हुन्छन्। गीतले परमेश्वरप्रति हामीहरूका भावनाहरू व्यक्त गर्दछ। गीतले भय, विश्वास, प्रेम, आनन्द, आत्मविश्वास, विस्मय, र हामीसँग परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा भएका अन्य भावनाहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई अभिव्यक्त गर्न सक्छ।
संगीत एकताको अभिव्यक्ति हुनुपर्दछ - यद्यपि यो अक्सर असहमतिको कारण हुन्छ। विभिन्न संस्कृतिहरू र विभिन्न समूहहरूले विभिन्न तरिकामा परमेश्वरको प्रशंसा व्यक्त गर्दछन्। लगभग सबै नगरपालिकामा विभिन्न संस्कृतिहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। केही सदस्य नयाँ गीतहरू सिक्न चाहन्छन्; केहि पुराना गीतहरु को उपयोग गर्न को लागी। यस्तो लाग्छ कि भगवान दुबै लाई मन पराउनुहुन्छ। उहाँ हजार वर्ष पुरानो भजनहरू मन पराउनुहुन्छ; उसलाई नयाँ गीतहरू पनि मन पर्छ। यो पनि ध्यान दिनुहोस् कि केही पुराना गीतहरू - भजनहरू - नयाँ गीतहरू आदेश दिन्छन्:
हाम्रो संगीतमा हामीले उनीहरूको खाँचोलाई विचार गर्नुपर्दछ जो हाम्रो चर्च पहिलो पटक आउँदछन्। हामीलाई संगीत चाहिन्छ कि तिनीहरूले अर्थपूर्ण पाउन्, संगीत जसले आनन्दलाई यसरी व्यक्त गर्दछ कि उनीहरूले यसलाई रमाईलो मान्दछन्। यदि हामी मात्र गीतहरू गान्छौं जुन हामी मनपराउँदछौं, यसको मतलब यो हो कि हामीले अरूको भन्दा हाम्रो आफ्नै हितको बारेमा धेरै चासो राख्छौं।
हामी नयाँ समकालीन गीतहरू सिक्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले नयाँ मानिस पूजा गर्न आउने प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं। हामीले तिनीहरूलाई अहिले नै सिक्नुपर्दछ ताकि हामी तिनीहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा गाउन सकौं। तर संगीत हाम्रो आराधनाको एक पक्ष मात्र हो। उपासना भनेको हाम्रो भावनाहरू व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हाम्रो दिमाग, विचारहरू पनि समावेश छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो आदानप्रदानको एक भाग प्रार्थनाको रूपमा छ। परमेश्वरका भेला भएका मानिसहरू जस्तो हामी परमेश्वरसँग बोल्दछौं। हामी केवल कविता र गीतहरूको साथ, तर साधारण शब्दहरू र भाषाबाट पनि उनको प्रशंसा गर्छौं। र यो बाइबलीय उदाहरण हो कि हामी सँगै र व्यक्तिगत रूपमा दुबै प्रार्थना गर्दछौं।
परमेश्वर केवल प्रेम मात्र होइन सत्य पनि हुनुहुन्छ। एक भावनात्मक र एक तथ्य घटक छ। त्यसकारण हामीलाई हाम्रो उपासनामा सत्य चाहिन्छ र हामी सत्यलाई परमेश्वरको वचनमा पाउँछौं। बाइबल हाम्रो अन्तिम अधिकार हो, हामीले गर्ने सबै कुराको जग। प्रवचन यो अधिकारमा आधारित हुनुपर्दछ। हाम्रा गीतहरूले पनि सत्य प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ।
तर सत्य कुनै अस्पष्ट धारणा होईन जुन हामी भावना बिना कुरा गर्न सक्छौं। परमेश्वरको सत्यले हाम्रो जीवन र हाम्रो हृदयलाई असर गर्दछ। यो हामीबाट उत्तरको माग गर्दछ। यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण हृदय, दिमाग, आत्मा र शक्ति चाहिन्छ। त्यसकारण प्रवचनहरू जीवनसँग सान्दर्भिक हुनु आवश्यक छ। प्रवचनले अवधारणा व्यक्त गर्नुपर्दछ जसले हाम्रो जीवनलाई असर गर्छ र हामी कसरी सोच्दछौं र कार्य गर्दछौं आइतवार, सोमवार, मंगलबार, आदि। घर र काममा।
प्रवचनहरू सत्य हुनुपर्दछ र पवित्र शास्त्रमा आधारित हुनुपर्दछ। प्रवचन व्यावहारिक हुनुपर्दछ, वास्तविक जीवनलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। प्रवचनहरू भावनात्मक पनि हुनुपर्दछ र हार्दिक जवाफ राम्रोसँग जगाउँदछ। हाम्रो उपासनामा परमेश्वरको वचन सुन्नु र हाम्रो पापहरूको लागि पश्चात्ताप गर्नु र उहाँले दिनुहुने मुक्तिको आनन्दमा समावेश गर्नु पनि समावेश छ।
हामी घरमा प्रवचनहरू सुन्न सक्छौं MC / CD वा रेडियोमा। त्यहाँ धेरै राम्रा उपदेशहरू छन्। तर यो सेवामा भाग लिने पूर्ण अनुभव होइन। उपासनाको रूपमा, यो केवल आंशिक सहभागिता हो। उपासनाको कुनै सांप्रदायिक पक्ष छैन जुन हामी सँगै प्रशंसा गाउँछन्, सँगै परमेश्वरको वचनको जवाफ, एक अर्कालाई हाम्रो जीवनमा सत्य व्यवहारमा राख्न आग्रह।
यद्यपि घर-घर भएका मसीहीहरूलाई शारीरिक मदत चाहिन सक्छ, तिनीहरू प्रायः भावनात्मक र आध्यात्मिक तवरमा अरूको सेवा गर्न सक्दछन्। तैपनि, "घरमा बस्नुहोस्" इसाईमत आवश्यकताको आधारमा अपवाद हो। येशू शारीरिक रूपमा सक्षम आफ्ना चेलाहरूले यसो गरेको चाहनुहुन्न थियो।
सेवाहरू हाम्रो पूजाको भाग मात्र हुन्। हप्तामा हामीले गर्ने सबै कुरालाई प्रभाव पार्न परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदय र दिमागमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। पूजा यसको ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्दछ, तर यो कहिल्यै रोकिनु हुँदैन। परमेश्वरलाई हाम्रो जवाफको अंशमा व्यक्तिगत प्रार्थना र बाइबल अध्ययन पनि समावेश छ। अनुभवले देखाउँदछ कि यी विकासको लागि बिल्कुल आवश्यक छ। आत्मिकरूपमा हुर्केका मानिसहरु परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको बारेमा जान्न चाहना गर्दछन्। उहाँहरुमा उहाँका अनुरोधहरू सम्बोधन गर्न, उहाँसँगको आफ्नो जीवन बाँड्न, उहाँसँग हिड्न, उहाँहरूको निरन्तर उपस्थितिको बारेमा सचेत हुन तिनीहरू उत्सुक छन्। परमेश्वरप्रतिको हाम्रो भक्तिले हाम्रो मुटु, दिमाग, आत्मा र शक्ति समेट्छ। हामीसँग प्रार्थना र अध्ययनको अभिलाषा हुनुपर्दछ, तर यदि यो हाम्रो इच्छा होइन भने पनि हामीले यसलाई अभ्यास गर्न आवश्यक छ।
यसले मलाई जोन वेस्लीलाई एक पटक दिएको सल्लाह सम्झाउँदछ। आफ्नो जीवनको यस घडीमा उनले भने, उनीसँग इसाईमतको बौद्धिक समझ थियो, तर उसले आफ्नो हृदयमा विश्वास महसुस गरेन। त्यसैले उसलाई सल्लाह दिइयो: विश्वास नभएसम्म विश्वासको प्रचार गर्नुहोस् - र यदि तपाईंसँग यो छ भने, तपाईंले अवश्य यो प्रचार गर्नुहुनेछ! उनलाई थाहा थियो कि उनको विश्वासको प्रचार गर्ने कर्तव्य छ, त्यसैले उसले आफ्नो कर्तव्य गर्नु पर्छ। र समयको क्रममा, परमेश्वरले उसलाई आफूसँग भएको कुरा दिनुभयो। उनले उसलाई विश्वास दिए जुन तपाईंले हृदयमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। उसले कर्तव्यको भावनाबाट पहिले के गरेको थियो, उसले अब इच्छाले गरेको हो। परमेश्वरले उनलाई चाहिएको चाहना प्रदान गर्नुभयो। परमेश्वर हाम्रोलागि पनि त्यस्तै गर्नुहुनेछ।
प्रार्थना र अध्ययनलाई कहिलेकाँही आध्यात्मिक विषयहरू पनि भनिन्छ। "अनुशासन" सजाय जस्तो लाग्न सक्छ, वा केहि अप्रिय कुरा जुन हामीले आफैंलाई गर्न बाध्य पार्नु पर्छ। तर अनुशासन शब्दको सही अर्थ केहि हो जुन हामीलाई विद्यार्थी बनाउँछ, त्यो हो, यसले हामीलाई सिकाउँछ वा सिक्न मद्दत गर्दछ। शताब्दीयौंको दौडान, आध्यात्मिक नेताहरूले पत्ता लगाए कि केहि गतिविधिहरूले हामीलाई परमेश्वरबाट सिक्न मदत गर्दछ।
त्यहाँ धेरै अभ्यासहरू छन् जसले हामीलाई परमेश्वरसँग हिंड्न मद्दत गर्दछ। चर्चका धेरै सदस्यहरू प्रार्थना, शिक्षा, ध्यान र उपवाससँग परिचित छन्। र तपाईं अन्य विषयहरूबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सरलता, उदारता, उत्सवहरू वा विधवा र टुहुरा भेट्न। सेवाहरूमा भाग लिनु पनि आध्यात्मिक अनुशासन हो जसले परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्छ। हामीले प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र अन्य आध्यात्मिक बानीहरूबारे साना समूहहरूमा गएर अरू मसीहीहरूले यस किसिमको उपासना कसरी गरिरहेका हुन्छौं भनेर सिक्न सक्छौं।
वास्तविक विश्वासले वास्तविक आज्ञाकारितातर्फ डो .्याउँछ - यदि यो आज्ञाकारिता रमाईलो छैन भने पनि, यदि यो बोरिंग छ भने पनि, यसले हाम्रो व्यवहार बदल्न आवश्यक छ भने पनि। हामी आत्मा र सत्यतामा, चर्चमा, घरमा, काममा, र जहाँसुकै हामी उहाँको आराधना गर्दछौं। चर्च परमेश्वरका मानिसहरू मिलेर बनेको छ र परमेश्वरका व्यक्तिहरू दुवै निजी र सार्वजनिक पूजा गर्दछन्। दुबै चर्चको आवश्यक कामहरू हुन्।
पहिले नै सिकेका व्यक्तिहरू नि? तपाईले शिक्षक बन्नु पर्छ भविष्यको पुस्तामा सत्य साझा गर्नु। स्पष्टतः त्यहाँ पास्टरहरूको धेरै शिक्षा छ। तर पावलले सबै ख्रीष्टियनहरूलाई सिकाउने आदेश दिए। सानो समूहले एक अवसर प्रदान गर्दछ। परिपक्व इसाईहरूले वचन र उदाहरणद्वारा दुवै सिकाउन सक्छन्। ख्रीष्टले उनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्नुभयो भनेर अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूको विश्वास कमजोर छ भने, तिनीहरूले अरूको प्रोत्साहन लिन सक्छन्। यदि तिनीहरूको विश्वास बलियो छ भने, तिनीहरूले कमजोरहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछन्।
भगवान अरूलाई तिनीहरूको भूमिकाको लागि तयार गर्न को लागी नेताहरू प्रदान गर्दछ। परिणाम वृद्धि, परिपक्वता र एकता हो यदि हामीले प्रक्रियालाई भगवानको इच्छा अनुसार जान दियौं भने। केही इसाई विकास र शिक्षा साथीहरूबाट आउँदछ; केहि चीजहरू ती मानिसहरूबाट आउँदछन् जोसँग चर्चको इसाई जीवनको सिकाउने र अनुकरणीय चर्चमा विशिष्ट कार्य हुन्छ। जो मानिस आफैंलाई अलग गर्दछ उसले विश्वासको यस पक्षलाई हराउँछ।
एक चर्चको रूपमा, हामी सिक्न मा चासो थियो। सकेसम्म धेरै शीर्षकहरूको बारेमा सत्य जान्नु हाम्रो चिन्ताको विषय हो। हामी बाइबल अध्ययन गर्न उत्सुक थियौं। ठिकै छ जस्तो लाग्छ कि केहि जोस हराएको छ। सायद यो सैद्धान्तिक परिवर्तनको अपरिहार्य परिणाम हो। तर हामीले सिक्नु भएको प्रेमलाई हामीले फेरि प्राप्त गर्नुपर्दछ।
हामीसँग धेरै कुरा सिक्नु छ - र धेरै धेरै लागू गर्न को लागी। स्थानीय चर्चहरूले बाइबल अध्ययनहरू, नयाँ विश्वासीहरूको लागि कक्षा, प्रचारप्रसारको शिक्षण, आदि प्रदान गर्नुपर्दछ। हामीले ल्यापिपोलाई उनीहरूलाई रिहा गरेर, प्रशिक्षण दिएर, उपकरणहरू दिएर, तिनीहरूलाई नियन्त्रण दिएर र तिनीहरूको बेवास्ता गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ!
समुदाय ईसाईहरु बीच स्पष्ट पारस्परिक सम्बन्ध छ। हामी सबैले संगति दिनुपर्दछ र प्राप्त गर्नुपर्दछ। हामी सबैले प्रेम दिनु पर्छ र प्राप्त गर्नु पर्छ। हाम्रो साप्ताहिक बैठकहरूले समुदाय हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउदछ, दुबै ऐतिहासिक र यस क्षणमा। समुदाय भनेको एक अर्कासँग खेल, कुराकानी र समाचारको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा बढी हो। यसको अर्थ एक अर्कासँग जीवन बाँडफाँड गर्नु, भावनाहरू साझा गर्नु, आपसी बोझ बोक्नु, एक अर्कालाई प्रोत्साहन गर्नु र खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु हो।
पुरानो दिनमा मानिसहरू प्राय जसो हिड्दैनथे। समुदायहरू जहाँ मानिसहरू एक अर्कालाई चिन्ने गठन गर्न सजिलो थियो। तर आजको औद्योगिक समाजमा, मानिसहरू प्रायः आफ्ना छिमेकीहरूलाई चिन्दैनन्। मानिसहरू प्रायः उनीहरूको परिवार र साथीहरूबाट अलग हुन्छन्। व्यक्तिहरू सँधै मास्क लगाउँदछन्, उनीहरूलाई आफू भित्र को हुँ भनेर थाहा दिन कहिल्यै सुरक्षित महसुस गर्दैनन्।
पहिलेका चर्चहरूले साना समूहहरूमा जोड दिनुपर्दैनथ्यो - तिनीहरू आफैले बनाएका थिए। किन आज हामीले उनीहरूलाई जोड दिन जरुरी छ त्यो समाज यति धेरै परिवर्तन भएको छ। क्रिश्चियन चर्चहरूको हिस्सा हुनुपर्दछ कि आपसी सम्बन्धहरू वास्तवमै निर्माण गर्न, हामीले मसीही मित्रता / अध्ययन / प्रार्थना सर्कलहरू बनाउनको लागि घेरा हाल्नु पर्छ।
हो, यसले समय लिने छ। हाम्रो मसीही जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न साँच्चै समय लाग्छ। अरूको सेवा गर्न समय लाग्छ। तिनीहरूलाई कुन सेवाहरू चाहिन्छ भनेर पत्ता लगाउन पनि समय लाग्छ। तर यदि हामीले येशूलाई हाम्रो प्रभुको रूपमा स्वीकार्यौं भने, हाम्रो समय हाम्रो आफ्नै हुँदैन। येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवन मा माग गर्दछ। ऊ पूर्ण समर्पणको माग गर्दछ, कुनै झूटो इसाईमत होइन।
जब म यहाँ "सेवा" लाई छुट्टै कोटि को रूपमा सूचीबद्ध गर्छु, म शारीरिक सेवालाई जोड दिन्छु, शिक्षण सेवा होइन। शिक्षक पनि खुट्टा धुने एक व्यक्ति हो, जसले येशूले के गर्नुभएर मसीहीधर्मको महत्त्व देखाउनुहुन्छ। येशूले खाना र स्वास्थ्य जस्ता शारीरिक आवश्यकताहरूको ख्याल राख्नुभयो। शारीरिक रूपमा, उसले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिए। प्रारम्भिक चर्चले खाँचोमा परेकाहरूलाई सम्पत्ति बाँडफाँड गरेर भोकाहरूको लागि चन्दा संकलन गरेर शारीरिक सहायता प्रदान गर्‍यो।
तपाईसँग कस्तो आत्मिक बरदान छ? तपाईं यसलाई पत्ता लगाउन परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ, तर प्राय जसो परीक्षण तपाईंको अनुभवमा निर्भर गर्दछ। तपाईंले विगतमा के गर्नुभयो जुन सफल भएको छ? तपाईलाई के राम्रो लाग्यो? विगतमा तपाईले अरूलाई कसरी सहायता गर्नुभयो? आध्यात्मिक वरदानको उत्तम जाँच भनेको इसाई समाजमा सेवा हो। चर्चमा फरक भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुहोस् र अरूलाई सोध्नुहोस् कि तपाईं के राम्रो गर्नुहुन्छ? स्वेच्छाले साइन अप गर्नुहोस्। प्रत्येक सदस्यको चर्चमा कम्तिमा एउटा भूमिका हुनुपर्दछ। फेरि, साना समूहहरु आपसी सेवा को लागी एक उत्कृष्ट अवसर हो। उनीहरूले कामको लागि धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछन् र तपाईंले के राम्रो गर्नुहुन्छ र के तपाईंलाई रमाईलो गर्नुहुन्छ त्यसका बारे प्रतिक्रियाको लागि धेरै अवसरहरू।
इसाई समुदायले हाम्रो वरिपरिको संसारलाई पनि यो शब्दमा मात्र नभई यी शब्दहरूसँगै गर्ने कार्यहरू पनि गर्दछ। भगवान बोलेन मात्र - उनले पनि अभिनय गरे। कामले देखाउँदछ कि परमेश्वरको प्रेमले हाम्रो हृदयमा गरिबहरूलाई मद्दत गरेर, निराश मानिसहरूलाई सान्त्वना दिएर, पीडितहरूलाई उनीहरूको जीवनको अर्थ खोज्न सहयोग गर्दछ। यो ती हुन् जसलाई व्यावहारिक सहयोग चाहिन्छ जसले प्रायः सुसमाचारको सन्देशलाई जवाफ दिन्छन्।
शारीरिक सेवा केही तरिकामा सुसमाचार समर्थनको रूपमा देख्न सकिन्छ। यो प्रचारको समर्थन गर्न को एक तरीका को रूप मा देख्न सकिन्छ। तर केहि सेवाहरू कुनै पनी फिर्ता प्राप्त गर्न कोशिस नगरी सर्तहरू बिना प्रदर्शन गरिनुपर्दछ। हामी केवल सेवा गर्दछौं किनकि ईश्वरले हामीलाई केही अवसरहरू प्रदान गर्नुभएको छ र आपतकालिन पहिचानको लागि हाम्रो आँखा खोल्दछ। येशूले धेरै मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो र तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तुरुन्तै उनीहरूको चेला बन्न बोलाएनन्। उसले यो गर्यो किनकि यो गर्नुपर्ने थियो र एक आपतकाल देख्यो कि ऊ कम गर्न सक्छ।
"संसारमा जानुहोस् र सुसमाचारको घोषणा गर्नुहोस्" येशू हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। इमान्दार हुन, हामीसँग यस क्षेत्रमा सुधारको लागि धेरै ठाउँहरू छन्। हामी आफैंमा आफ्नो विश्वास राख्ने बानी भएका छौं। हो, पिताले बोलाउनुभएन भने मानिसहरू परिवर्तन हुन सक्दैनन्, तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नु हुँदैन!
सुसमाचारको सन्देशको प्रभावकारी भण्डारे हुन हामीलाई चर्च भित्र सांस्कृतिक परिवर्तनको आवश्यकता छ। हामी अरू मानिसहरूलाई यसो गर्न दिएर सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं। हामी रेडियो वा म्यागजिनमा यो काम गर्न अन्य मानिसहरूलाई काममा लगाएर सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं। यी प्रकारका प्रचारक गलत छैनन्, तर ती पर्याप्त छैनन्।
इभान्जेलिजमलाई व्यक्तिगत अनुहार चाहिन्छ। जब परमेश्वर मानिसहरूलाई सन्देश पठाउन चाहानुहुन्छ, उहाँले मानिसहरू त्यसो गर्न प्रयोग गर्नुभयो। उसले आफ्नै छोरा, परमेश्वर शरीरमा प्रचार गर्नलाई पठायो। आज उसले आफ्ना छोरा छोरीहरू, जसमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ, सन्देश प्रचार गर्न र प्रत्येक संस्कृतिमा यसलाई सही रूप दिन पठाउँदछ।
म हामी सबैलाई आफू वरपरका मानिसहरू कसरी मसीही साक्षी बन्न सक्छ भनेर सोच्न प्रोत्साहित गर्दछु। म प्रत्येक सदस्यलाई आदेश पालन गर्न प्रोत्साहित गर्दछु प्रतिक्रियाको लागि तयार हुनको लागि। म प्रत्येक सदस्यलाई प्रचारको बारेमा पढ्न र उनीहरूले पढेका लागू गर्न प्रोत्साहन गर्दछु। हामी सबै मिलेर सिक्न सक्छौं र एक अर्कालाई राम्रो काम गर्न उत्साहित गर्न सक्छौं। साना समूहहरूले प्रचारप्रसारको लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्न सक्दछन् र साना समूहहरूले प्राय: ईभान्जेलिस्टिक परियोजनाहरू आफैंमा गर्न सक्छन्।
केहि केसहरूमा, सदस्यहरू आफ्ना पास्टरहरू भन्दा छिटो सिक्न सक्छन्। ठिक छ। त्यसोभए पास्टरले सदस्यबाट सिक्न सक्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई बिभिन्न आत्मिक उपहारहरू प्रदान गर्नुभएको छ। उसले हाम्रा केही सदस्यहरूलाई प्रचारप्रसारको वरदान दिएका छन जसलाई जगाउनु र नेतृत्व गर्नुपर्दछ। यदि पादरीले यस व्यक्तिलाई यस प्रकारको प्रचारप्रसारको लागि आवश्यक औजारहरू उपलब्ध गराउन सक्दैनन् भने, पादरीले कम्तिमा पनि व्यक्तिलाई सिक्न, अरूको लागि उदाहरण हुन, र प्रचारप्रसार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ताकि सम्पूर्ण चर्च बढ्न सक्दछ। चर्चको कामको यस छ-भाग योजनामा, मलाई लाग्छ कि प्रचारकार्यलाई जोड दिन र यस पक्षलाई जोड दिन महत्त्वपूर्ण छ।